Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Haaland Oo Sharuud Ku Xiray Joogitaan BSV, Xaalka Juan Musso, Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Haaland oo sharuud ku xiray joogitaan BSV, Xaalka Juan Musso, iyo Qodobo kale
March 22, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Inkasta oo uu seegay xiddiga khadka dhexe ee Dele Alli intii lagu jiray suuqii January, Paris Saint-Germain ayaa wali xiiso u qabta saxiixa xiddiga Tottenham, Calciomercato .
Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu la midoobo daafaca kooxda Napoli Kalidou Koulibaly si uu ugu soo biiro kooxda Everton sida ay qortay Football Insider.
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 22 Maarso
Madaxa fulinta ee kooxda Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa meesha ka saaray fursad kasta oo Hansi Flick loogu badali lahaa Joachim Low xilka tababarenimo ee xulka Jarmalka. Welt
Goolhayaha Udinese ee reer Argentina Juan Musso, oo 26 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu iska diido dalabyada Inter iyo AC Milan si uu ugu biiro Roma . Todofichajes
Juventus ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto Everton heshiis kaash ah iyo lacag kaash ah si ay weeraryahanka reer Talyaani Moise Kean, 21, ugu soo biiriso kooxda.Teamtalk
Maamulaha Mikel Arteta ayaa sheegay in Xidiga reer Norway Martin Odegaard uu yahay hogaamiyaha kooxda Arsenal wuxuuna si maldahan u sheegay inuu heshiis joogto ah la gali doono 22 jirka qadka dhexe ee Real Madrid . Mirror
Liverpool ayaan ka warqabin wax heshiis hordhac ah oo Barcelona ay kula soo saxiixaneyso qadka dhexe reer Holland Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah Liverpool Echo
Weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah, ayaa wakiilkiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka tago Borussia Dortmund haddii kooxda, oo kaalinta shanaad kaga jirta Bundesliga, aysan u soo bixin Champions League. AS
Agaasimaha kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa sheegay in kooxda reer Talyaani ay dooneyso inay ceshato weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah. Sky Sport Italia
Paris Saint-Germain ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah kula jirta 18 jirka weerarka ka ciyaara Nesta Zahui, sida laga soo xigtay L’Equipe .